वू यफन, एक चिनियाँ क्यानाडा गायक, कथित रूपमा बलात्कार - Pandaily
वू यफन, एक चिनियाँ क्यानाडा गायक, कथित रूपमा बलात्कार
Categories: Culture Pandaily अगस्ट 17, 2021 अगस्ट 17, 2021 मा पोस्ट
सोमबार साँझ, बेइजिङ चायोयाङ जिल्ला जनक प्रकोषेटेटले पपप स्टार वू यफनको गिरफ्तारीलाई स्वीकृत गर्यो।
वू “बारम्बार युवा केटीहरूको यौन व्यापारलाई धोका दिए”, बीजिंग पुलिसद्वारा आपराधिक हिरासतमा राखिएको थियो र 16 अगस्त को बलात्कारको आरोप लगाइएको थियो। केही वकीलले संकेत दिए कि यद्यपि वू एक चिनियाँ क्यानाडा हो, तर यदि दोषी भएमा, उहाँले चीनमा एक सेवा गर्नु पर्छ।
“अभियोजकले पक्राउ गरेको अनुमोदन स्वीकृत गरेको छ कि वू आधिकारिक रूपमा गिरफ्तार गरिएको छ, अभियुक्तले फेला पारेको वू यफन आपराधिक अपराधको लागी शंकास्पद भएको छ, जसको अर्थ हो कि वू यफन अब अर्को सानो सम्भावना छ। अर्को चरण, यदि कुनै विशेष परिस्थिति छैन भने अभियोजन सम्भव छ।
गत महिना, वू उनको 19वर्षीय वेब क्यामेरा सेलिब्रिटी डु मेजुहु 17 वर्षको उमेरमा बलात्कार गरेको आरोप लगाएको थियो। पीडितले विजुकी वा स्टुडियोको भर्खरै भर्खरै भर्खरै भर्खरै भर्खरै भर्ना गरेकी थिईन्, उनीहरूलाई पिउनको लागि उनीहरूलाई पिउनको लागि उनीहरूलाई पिउनको लागि उनीहरूलाई पिउनको लागि धेरै दबाब दिए। उनले भने कि वू कम्तीमा 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका अन्य केटीहरू समान यौन सम्बन्ध थियो। Du Mou पछि, त्यहाँ अनलाइन मा धेरै अन्य महिला पीडितहरू आफ्नै अनुभव जारी गरे। वू चीनको सोशल मिडियामा यो घोटालाको सार्वजनिक रायको निन्दा गरिएको छ।
अर्को हेर्नुहोस्:कसले ताराको शुभकामनार्थ वू यफनलाई पनि समर्थन गरिरहेको छ?
अगस्तको सुरुमा पोर्श चीन सहित प्रमुख व्यापार ब्रान्डका एक समूहले आफ्नो सहयोग समाप्त गर्यो। लुईस विइटनले 19जुलाई को साँझमा सहयोगको निलम्बनको घोषणा गरे, केही सार्वजनिक आलोचनाको नेतृत्वमा, त्यसपछि जुलाई 23 मा आधिकारिक रूपमा सहयोगको समाप्तिको घोषणा गरे।
अगस्त 16 को साँझ, घरेलू भिडियो साइट प्यार उत्कृष्ट कला, Youku, Tencent भिडियो सबै फिलिम र टेलिभिजन काम, QQ संगीत, Netease क्लाउड संगीत र अन्य संगीत प्लेटफार्म मा वू कास्ट संगीत काम गरेको छ। अगस्ट 1 को साँझमा, वू र यसको स्टूडियो माइक्रो ब्लगिङ खाता अवरुद्ध भएको थियो।
यो वर्ष, 30 वर्षीया वू यफन गुआंगजौ, गुआंग्डोंगमा जन्मिएको थियो, एक चीनी क्यानाडा हो, गुआंगजौ र वैंकूवरमा भयो। हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्तिहरू मध्ये एक, वान यान्जु बलियो प्रशंसक अपीलले उनलाई बनाउन र सेलिब्रेटी लाभांश प्राप्त गर्न आफ्नो पूंजीगत लगानीमा शर्त दिन्छ। 2017 फोर्ब्स चिनियाँ सेलिब्रेटी सूचीले देखाउँछ कि 150 मिलियन अमेरिकी डलरको वू यफन वार्षिक आय 10 औं स्थानमा छ।
टोक्यो ओलम्पिक खेलहरूको गलत जानकारीको साथ “ध्यान अर्थव्यवस्था” को वृद्धि संग चिनियाँ सोशल मिडियामा पागल पास पारिएको छ
Gloria Li अगस्ट 12 अगस्ट 12 मा पोस्ट
2020 टोक्यो ओलम्पिक खेलहरूको दौडान, चीनको मुनाफा मीडिया उद्योगबाट मानिसहरूको भावनाहरूको परिष्कृत नियन्त्रणको माध्यमबाट प्रवाह उत्पन्न भयो।
बीजिंगले तेस्रो बच्चाको आमाबाबुलाई 30 दिन दिनेछ
Pandaily अगस्ट5अगस्ट5मा पोस्ट
31 मईको प्रावधानहरूको अनुसार, तेस्रो बच्चाको बीजिंग नागरिकले प्रजनन गर्दछन् 30 दिन छुट्टीको आनन्द उठाउनेछ र 15 दिन छुट्टीको साथ।
कसले ताराको शुभकामनार्थ वू यफनलाई पनि समर्थन गरिरहेको छ?
Xu Xin अगस्ट4अगस्ट4मा पोस्ट
पनि सुपरस्टार को गिरफ्तार गरे पछि, वू को समर्थकहरु को तर्क अझै पनि एक फर्म फाउंडल्ड हो। तिनीहरूले चिनियाँ स्त्रीहरूको विरुद्ध केही बारम्बार आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
चिनियाँ टेक्नोलोजी विशालले “ठूलो/सानो हप्ता” कार्य योजना पर्दा प्रदान गर्न
Pandaily जुलाई 16 जुलाई 16 मा पोस्ट
चिनियाँ सञ्जाल कर्मचारीहरूको लाखौं को लागी, ओभरटाइम वा ओभरटाइम एक अनन्त संघर्ष हो।
डेटिङ अनुप्रयोगको साथ जोडिएको: चीनको Z पीडित कहाँ छ?
Vivian Xu जुलाई 12 जुलाई 12 मा पोस्ट
गत दुई वर्षमा, अनलाइन डेटिङ प्लेटफर्मले चीनको युवा पीढीमा ठूलो स्वागत गरेको छ।